အမျိုးသမီးမျက်မြင်မရအရည်ကွန်ဒုံးအထီးကျန်လိင်အင်္ဂါချောဆီကိုဘက်တီးရီးယား,innတ္ရငျးနှီးရငျးနှီးဂျယ်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် - နှုတ်ခမ်း | မျက်စိ Cream| facial မျက်နှာဖုံး |L ကို Otion | facial Cream | မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ OEM / လိမ္မော်ရောင်, လက်ကားအရောင်း
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » အမျိုးသမီးမျက်မြင်မရအရည်ကွန်ဒုံးအထီးကျန်လိင်အင်္ဂါချောဆီကိုဘက်တီးရီးယား,innတ္ရငျးနှီးရငျးနှီးဂျယ်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်
မူလအစရာ: ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်နိုင်ငံ
ထုတ်ကုန်အမည်: Female invisible liquid condom
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းဘဝ: Two years
Supply နိုင်ခြင်း: 50000 နေ့နှုန်းအပိုင်းအစ / ပိုငျးပိုငျး
အရေအတွက်(အပိုင်းပိုင်း) 1 – 50000 >50000
အရှေ့. အချိန်(ရက်ပေါင်း) 45 ညှိနှိုင်းရမည့်
ထုတ်ကုန်အမည် Antibacterial contraception gel
အရောင် ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သော, gold, or customized
Supply type OEM / လိမ္မော်ရောင်
စွမ်းရည် 3g 4g 5g or customized
3g, 10g,50g, 100g, စသည်တို့.
Sophora ထုတ်ယူ, Honeysuckle ပန်းပွင့်ထုတ်ယူ,cnidium ထုတ်ယူမှု, ရှားစောင်းလက်ပတ်ထုတ်ယူ, စသည်တို့.
လုပ်ဆောင်ချက်များ & အင်္ဂါရပ်များ
Nano silver ရောင်ရမ်းခြင်းသည်သန့်ရှင်းသော bacteriostatic အနံ့detတ္ဌာနေ detox ဆေးကြောထားသောဂျယ်လ်ကိုဆေးကြောသန့်စင်သည်